सावधान ! भारतमा बलि चढाउनका लागि मानव तस्कर सकृय – Nepalkakura
सावधान ! भारतमा बलि चढाउनका लागि मानव तस्कर सकृय
काठमाडौंकी एक युवतीलाई मोडलिङका लागि भारत जानुपर्ने भन्दै एक समूहले २०७६ पुस महिनामा विराटनगर बोलायो। उनलाई जोगबनी नाका हुँदै बलि दिनकै लागि भारत लैजान खोज्ने ७ जना प्रहरीको फन्दामा परे। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा फेसन हाउस सञ्चालन गर्दै आएकी महिलाले मोडलिङका लागि ६ फिट हाइट भएकी युवती चाहिएको भन्दै उनीसँग कुरा गरेकी थिइन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रविन भट्टराईले लेखेका छन् ।
Previous शनिवार काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतको आपूर्ति बन्द हुने
Next हुम्लामा एक महिलालाई कुटपिट गर्नुका साथै दिसा ख्वाइयो
3 hours ago nepalkakura